Shir Looga Hadlayay Wadatashiga Bulshada Iyo Dowladaha Hoose Oo Jowhar Lagu Soo Gebagebeeyay – Banaadir weyne
Shir Looga Hadlayay Wadatashiga Bulshada Iyo Dowladaha Hoose Oo Jowhar Lagu Soo Gebagebeeyay
Kulan ku saabsanaa wadatashiga bulshada iyo dowladaha hoose ee qilaafadka la xiriira isqab-qabsiga dhulka iyo xallinta qilaafadkaasi islamarkaan socday muddo saddax maalmod ah ayaa maanta lagu soo gebagebeeyay magaalada Jowhar ee Caasimadda Hirshabelle.
Kulanka oo ay si wadajir ah u soo qaban- qaabiyen Wasaaradda Howlaha Guud ee Hirshabelle,hey’adaha Un-Habitat,IOM iyo Midowga Yurub ayaa muddadii uu socday waxa lagu gorfeeyya waxyaabaha sababa qilaafadka la xirira dhulka iyo sida lagu xalliyo marka ay dhacaan arrimahaani iyo kaalinta ay qeybaha bulshada iyo dowladdu ku leeyahiin xal u helidda qilaafadka iyo sidi ay ugu wada shaqeyn lahaayeen Horumarinta dib u dhiska deegaanka .
Masuuliyiin katirsan labada gole ee dowladda oo ay kamid yahiin wasiir Dowlaha Wasaaradda howlaha Guud ee Hirshabelle iyo Guddomiyaha Gobolka ayaa ka qeyb galay Xiritaanka shirkani wdatahsiga Bulshada iyo dowladaha hoose .
Qaar kamid ah Bulshada ka qeyb gashay wadatashiga ayaa aad u soo dhoweeyay arrintan iyagoo sheegay in loo baahan yahay hannaan ay ku wada shaqeeyaan bulshada iyo dowladda kaasi oo sahlin kara xal u helidda arrimaha qilaafadka dhulka ,waxaa sido kale ay bulshadu qeexeen in si xal looga gaaro arrintani loo baahanyahy in la xoojiyo hey’adaha garsoorka iyo cadaaladda oo kaalin ku leh xallinta qilaafadyadan .
Dhinaca kale Ururrada bulshada rayidka ee goobjoogga ka ahaa kulanka aya sheegay inay muhiim tahay aasaasidda guddi wadajir ah oo ay ku mideysan yihiin dowladda iyo Bulshada kaasi oo u xilsaaran arrimaha xallinta iyo go’aan ka gaarista howlaha Qilaaafadka dhulka .
Shirkan wadatashi ee maanta lagu soo gebagebeeyay magaalada Jowhar ayaa ah kii ugu horreeyay oo loo qabto bulshada si ay wadatashi ula yeelato Xubno katirsan Dowladaha hoose. – Jowhar News